NYI LYNN SECK 18+ DEN: April 2006
New Delhi's famous Lotus Temple. I'd been there to take photos justafew days ago. The visitor must take off one's shoes and walk several hundreds of metres to reach the immense white concrete structure (modern architecher) conceived by the architect Faribuz Sahba in 1986. Actually this temple is the Bahai Centre, and dedicated to Baha'u'llah ( I think you are not familiar with this name mostly, Google it!). He is the founder of the Baha'i' Faith Religion, quiet interesting one.
Tags : Lotus Temple India , Bahai , Bahaullah , Photography
Posted by NLS at 4/29/2006 05:17:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 05:12:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 04:49:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 04:21:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 03:19:00 AM0comments Links to this post
တစ်ခါတုန်းက ရဟန်းနှစ်ပါးဟာ ခရီးတစ်ခုက ပြန်လာပြီး ချောင်းတစ်ခုကို ကူးမယ် အလုပ်မှာ ချောင်းကူးဖို့ရာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို တွေ့တယ်။ ရေစီးကလည်းသန်၊ ကြောက်ကလည်း ကြောက်မို့ အမျိုးသမီးဟာ တစ်ဖက်ကမ်းကို ဖြတ်မကူးရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီ အထဲက ရဟန်းတစ်ပါးက အမျိုးသမီးကို ချီမပြီး ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းကို ပို့ပေးခဲ့တယ်။ တစ်ဖက်ကမ်း ရောက်တာနဲ့ အဲဒီ အမျိုးသမီးကို ချပြီး သီတင်းသုံးရာ ကျောင်းတှောကို ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ကျန်ရဟန်းတစ်ပါးဟာ အဲဒီကိစဿစကို စိတ်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေတယ်။ ရဟန်းတှောဟာ မာတုဂါမကို မထိတွေ့ကောင်းဘူးလို့ သူ့စိတ်မှာ ပြောနေမိတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သူဟာ သူ့ရဲ့ သီတင်း သုံးဖှောရဟန်းတွေကို အဲဒီကိစဿစ အကြောင်း ဖွင့်ပြောတဲ့အခါ ဘုရားရှင်နားကို ပေါက်ကြားပါသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဘုရားရှင်ဟာ အဲဒီ ရဟန်းတှော နှစ်ပါးကို ခှေါပြီးမေးတှော မူပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရဟန်းတှောက သူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကို သယ်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပါတယ်။ ထို့အတူပဲ အဲဒီ အမျိုးသမီးကိုလည်း မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာ အပြီးတိ်ုင် ချထားပြီး ချန်ရစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယ ရဟန်းတှောကသာ အဲဒီအမျိုးသမီးကို ယခုချိန်အထိ သယ်ယူလာသူ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှ ဒုတိယ ရဟန်းတှောဟာ မိမိအမှားကို ဝန်ခံပါတယ်တဲ့။
အလွန် လေးနက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေး တစ်ခုပါ။ ကျွန်တှော အလွန်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့တွေက ပထမ ရဟန်းတှောနဲ့ တူသလား၊ ဒုတိယ ရဟန်းတှောနဲ့ တူသလား စမ်းစစ် ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာ ကြာပြီ ဖြစ်လို့ အတိအကျ မညွှန်းနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်။
Tags : Buddha , Knowledge
Posted by NLS at 4/29/2006 02:36:00 AM0comments Links to this post
ခပ်သိမ်းသော အရာတို့သည် မိမိတို့ အချိန်ရှိ၏။ မိုးကောင်းကင်အောက် ကြံစည်သမျှ အသီးသီးတို့ကို ပြုရသော အချိန်ရှိ၏။ ဖွားချိန်နှင့် သေချိန်လည်း ရှိ၏။ စိုက်ပျိုးရသော အချိန်နှင့် နှုတ်သိမ်းရသော အချိန်လည်းရှိ၏။ သတ်ရသော အချိန်နှင့် အနာပျောက်စေရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ ဖြိုဖျက်ရသော အချိန်နှင့် တည်ဆောက်ရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ ငိုရသော အချိန်နှင့် ရယ်ရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ ညည်းတွားရသောအချိန်နှင့် ကခုန်ရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ ကျောက်တို့ကို ဖြန့်ကျဲရသော အချိန်နှင့် စုသိမ်းရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ ဖက်ယမ်းရသော အချိန်နှင့် မဖက်ယမ်းဘဲ ခွဲခွါနေရသော အချိန်လား ရှိ၏။ သိုထားရသော အချိန်နှင့် ပစ်လိုက်ရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ အဝတ်ကို ဆုတ်ရသော အချိန်နှင့် ချုပ်လုပ်ရသော အချိန်လည်းရှိ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ နေရသော အချိန်နှင့် စကားပြောရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။ ချစ်ရသော အချိန်နှင့် မုန်းရသော အချိန်လည်း ရှိ၏။
ကျွန်တှော အလွန်နှစ်သက်သော သမဿမာကျမ်းလာ စာသားတစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
From bible : Ecclesiastes 3. 1-8
Tags : Bible , Knowledge , Quotation
Posted by NLS at 4/29/2006 02:13:00 AM2comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 02:00:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 01:38:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 01:21:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 01:07:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/29/2006 12:55:00 AM0comments Links to this post
စာရေးဆရာ အယ်ဒီတာ ဆရာအောင်ပြည့် ကွယ်လွန်ခြင်း
စာရေးဆရာ အယ်ဒီတာ ဆရာအောင်ပြည့်ခှေါ ဦးခင်မောင်မြင့်သည် အသက် ၆၅နှစ် အရွယ်တွင် ယမန်နေ့ညနေ ၆ နာရီခန့်က ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ဆရာအောင်ပြည့်သည် ပြိုမှာလေလားမိုးရဲ့ အပါအဝင် လုံးချင်းဝတဿထုများစွာနှင့် နေရစ်တော့ မြသီလာ တကဿကသိုလ်ခံစားမှု ကဗျာပေါင်းချုပ် အပါအဝင် စာအုပ်များ ရေးသားခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်က ဖတ်စရာ ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေဆဲ ဖြစ်သည်။
Source : Nyein Chan , KP
Tags : Aung Pyae , News
Posted by NLS at 4/28/2006 11:25:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/28/2006 12:47:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/27/2006 10:55:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/27/2006 10:40:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/26/2006 11:28:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/26/2006 11:19:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/26/2006 07:59:00 PM0comments Links to this post
မနေ့ညက တိဘက် ဒလိုင်းလားမားနဲ့ ဟင်နရီဆိုတဲ့ တောင်တက် သမားတစ်ယောက်အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့7Years In Tibet ဆိုတဲ့ကားကို ကြည့်လိုက်ရတယ်။ အကြာကြီးပဲ။ အဲဒီကားပြီးတော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အသိစိတ်တစ်ခု ကျွန်တှော့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်သွားတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဘာမှန်းတော့ မသိဘူး။ မှန်လား မှားလားလည်း ကျွန်တှောမသိဘူး။ ဘရက်ပစ်ဒ် သရုပ်ဆောင်သွားတာ ကောင်းတယ်။ သူဟာ တောင်တက်ရတာကို ခုံမင်လွန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားတယ်။ တောင်ထိပ်ပှေါရောက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးအေးလူလူ ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ အခန်းကို တွေ့ရချိန်မှာ ကျွန်တှောဟာ သူ့လောက် တစ်စုံတစ်ခု အပှေါမှာ ခရေဇီ မဖြစ်သေးတာကို သိလိုက်တယ်။ ခုတလော သင်ခန်းစာ ရတာတွေ အများကြီးပဲ။ အရင်တုန်းက အခါခါဖတ်လည်း နားမလည်တဲ့ စာတွေ အနည်းငယ် နားလည်လာတယ်။ ဆင်းရဲစုတ်ပြတ် လွန်းတဲ့ ကုလားလေးတွေ ကိုကြည့်ပြီး ဒီကမဿဘာကြီးမှာ ကိုယ့်ထက် ဘဝပေး ကုသိုလ်ကံ မကောင်းတဲ့သူတွေ၊ သနားစရာကောင်းသူတွေ အများကြီးပါလားလို့ ထူးထူးခြားခြား အသိစိတ် ဝင်လာတယ်။ အဲဒီအသိစိတ်ဟာ စာဖတ်လို့ရတဲ့ အသိစိတ်မျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဦးနှောက်ထဲမှာ လက်ခနဲ ဖြစ်ပြီး ရသွားတဲ့ အသိစိတ်မျိုးလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တှောဟာ လောကမှာ တန်ဖိုးမဲ့ လူသား တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံး အဲဒီလိုလူတွေကို ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားစိတ်လေး အနည်းငယ် ဝင်လာမိတယ်။ အတွေ့အကြုံဟာ အကောင်းဆုံး ဆရာပဲ။ တိုးတက်ချင်စိတ်ကိုတော့ မွေးမြူဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။
တဆက်တည်း ဟိုးအရင်က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ သုခမြို့တှောဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို သွားသတိရတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ စာကိုပဲ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ လူတွေကို ကိုယ်တိုင် မြင်ရပြီ။ တံလျှပ်တွေ ထနေတဲ့ နေပူကျဲကျဲမှာ သုခမြို့တှောသားတွေဟာ အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်။ သူတို့ကိုယ်ကနေ အှောဂလီဆန်စရာ ကောင်းတဲ့ အညှီနံ့တွေ ထွက်နေတယ်။ သူတို့ သောက်နေတဲ့ ရေဟာ ကြောက်မက်ဖွယ် ရွံရှာဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့ဘဝမှာ အရှက်အကြောက် တရားထက် အသက်ရှင်သန်ဖို့ အရေးကြီးလေတော့ သူတို့ဟာ လူရှေ့သူရှေ့မှာလည်း အပေါ့အလေးစွန့်ဖို့ ဝန်မလေးကြဘူး။ မာသာထရီဇာဟာ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်နဲ့များ ဒီလိုလူတွေကြားထဲမှာ နေနိုင်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်လို စိတ်ထားနဲ့များ သူတို့ရဲ့ ရွံရှာဖွယ် ကိုယ်ခနဿဓာတွေကို ကိုင်တွယ် ဆေးကြော ကုသမှု၊ ကြင်နာမှုတွေ ပေးခဲ့လဲ။ ကျွန်တှော လေးလေးနက်နက် ဂုဏ်ယူမိပါရဲ့။ ဒါဟာ သာမန်လူမပြောနဲ့ လူတစ်သန်းမှာ တစ်ယောက် မလုပ်နိုင်တဲ့ မဟာဂရုဏာ တရားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာတိုင်းက ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဂရုဏာတရားနဲ့ မေတဿတာစိတ်ကို လက်တွေ့ လုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ရှေးရိုးစွဲ ဘာသာရေး ဝါဒီတွေဆို ဘာပြောကြမလဲ။ ကိုယ်နဲ့ ယုံကြည်ရာ ဘာသာမတူလို့ သူမ အယူလွဲမှားနေတယ် ဆိုပြီး အပါယ်ကျနေမယ်လို့ ပြောကြမလား။ ကျွန်တှော လက်မခံဘူး။ သူမဟာ တရားထက် အလုပ်ကို လုပ်သွားသူ ဖြစ်လို့ ဘယ်ဘာသာ ဖြစ်နေပါစေ စိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရှိတဲ့ ဘုံဘဝ တစ်ခုကို သေချာပေါက် ရရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တှော ယုံကြည်နေမိပါတယ်။
Posted by NLS at 4/26/2006 07:12:00 PM0comments Links to this post
Google နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက် အားလုံးကို စုစည်းပေးထားတဲ့ အခရိုဘတ်ဖိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂူဂယ်လ်နဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့ အင်တာနက် ယူဇာတိုင်း ကူးယူ သ်ိမ်းဆည်းထားသင့်တဲ့ ဖိုင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ [Direct Download]
Tags: Google Cheat Sheet , Download
Posted by NLS at 4/25/2006 11:13:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/25/2006 10:59:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/25/2006 09:42:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/24/2006 02:07:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့တွင် သေတဿတာတစ်လုံး ရှိသည်။ နှမြောလို့ ဘာမှ သိမ်းဆည့်းမထားပါ။
ကျွန်တှော့တွင် သေတဿတာတစ်လုံး ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ခု ထည့်ထားခဲ့မိပြီး ပျောက်ရှသွားမှာ စိုးရိမ်သောကြောင့် အသေသော့ခတ် ထားခဲ့သည်။ မည်သည့်အရာမျှ ထပ်ထည့်í မရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း အရာများစွာ ထည့်သွင်းခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
ကျွန်တှော့တွင် သေတဿတာတစ်လုံး ရှိသည်။ အထဲက အရာကို လူများ မသိနိုင်ပါ။ ကျွန်တှောကလည်း မပြလိုပါ။
ကျွန်တှော့တွင် သေတဿတာတစ်လုံး ရှိသည်။ ယုံကြည်သူများ အပ်နှံသောအခါ အဆင်ပြေစေရန် ကျွန်တှော သေချာ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် သေတဿတာတစ်လုံး ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ရာကို ထည့်သိမ်းထားသင့်သလား၊ ထည့်မသိမ်းသင့်ဘူးလား၊ သူများတွေအတွက် ထားလိုက်ရမှာလား ကျွန်တှော မဆုံး ဖြတ်ရသေးပါ။
ကျွန်တှော့တွင် ပေတံ တစ်ချောင်း ရှိသည်။ အလယ်မှတ်မှာ သုညဖြစ်သည်။
ကျွန်တှော့တွင် ပေတံ တစ်ချောင်းရှိသည်။ လူတစ်ယောက်ကို တိုင်းတာဖို့သှောလည်းကောင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိုင်းတာဖို့သှောလည်းကောင်း ရွံရှာသောကြောင့် တစ်ခါမှ မကိုင်တွယ်ခဲ့ပါ။
ကျွန်တှော့တွင် ပေတံ တစ်ချောင်းရှိသည်။ မျဉ်းဖြောင့် တစ်ချောင်းဆွဲဖို့ ပေတံသည် မရှိမဖြစ်လိုသော အရာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသလား။
ကျွန်တှော့တွင် နာရီတစ်လုံး ရှိသည်။ အချိန်လိုက်နာရသော အလုပ်ကို မုန်းတီးသောကြောင့် ဓါတ်ခဲ ကုန်သွားသောအခါ အသစ်မလဲ ဖြစ်တော့ပေ။
ကျွန်တှော့တွင် နာရီတစ်လုံး ရှိသည်။ အချိန် မနောက်ကျစေရန် ကျွန်တှော့ နာရီကို ပုံမှန်ထက် ၁၀ မိနစ် မြန်ထားသည်။ သို့သှောလည်း ထိုသို့ မြန်ထားသည်ကို သိနေသောကြောင့် ကျွန်တှော ထို၁၀ မိနစ်ကို အမြဲ လျစ်လျူရှုဆဲ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တှော့တွင် နာရီတစ်လုံး ရှိသည်။ အချိန်တန်ဖိုး အကြောင်း ရေးသားထားသော စာအုပ်ကို ဖတ်နေရင်း လက်ထဲမှာ နာရီကို ကြည့်လိုက်မိသောအခါ စက်ပျက်ပြီး ရပ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ကျွန်တှော့တွင် နာရီတစ်လုံး ရှိသည်။ အရွေ့မြန်လွန်းသော အချိန်ကို မုန်းသောကြောင့် ပထမဆုံး စကဿကန့် လက်တံလေးကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ ဒုတိယ မိနစ်တံလေးကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ တတိယ နာရီ လက်တံလေးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ စိတ်ချမ်းသာသွားသလို ခံစားမိနေဆဲတွင် ဒိုင်ခွက်မှ ရက်စွဲက တစ်ရက်သို့ ကူးသွားခဲ့သည်။ ကျွန်တှော ထိုနာရီကို ထုခွဲ ဖျက်ဆီး ပစ်သင့်ပါသလား။
ကျွန်တော့တွင် နာရီတစ်လုံး ရှိသည်။ အခြားသောသူများနှင့် တွေ့သောအခါ သူတို့က မင်းပတ်ထားတာ ဘာနာရီလဲဟု အရင်စူးစမ်းကြသည်။ ထိုနာရီကို ပတ်ထားတာ ဘယ်လိုကောင်လဲလို့ သင်တို့ စဉ်းစားဖူးပါသလား။
ကျွန်တှော့တွင် နာရီတစ်လုံး ရှိသည်။ ထိုနာရီထဲတွင် အချိန်ကာလ ၂၆ နှစ်၊ မျက်ရည်စက်များ၊ အှောဟစ်သံ၊ ရမက်၊ ဒေါသ၊ သည်းခံခြင်း၊ အတဿတ၊ ကျဉ်းကြပ်မှုများ၊ သက်ပြင်းချသံတစ်ချို့နဲ့ အသိပညာတစ်ချို့ ရှိနေပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် ဂစ်တာ တစ်လုံး ရှိသည်။ ဂစ်တာ ဆိုသည်မှာ ကြိုးများ မညီညာသောအခါ မုန်းတီးဖွယ်ရာ အသံများ ထွက်ပှေါလာစေတတ်သော တူရိယာ တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသွင်မတူသူများနှင့် မပေါင်းသင်းလိုခြင်း ဘာသာဗေဒကို ဂစ်တာတီးတတ်သူ၊ အနုပညာ အခံရှိသူများ ဆက်စပ် တွေးတောပြီး နားလည်ပေး နိုင်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် ဂစ်တာ တစ်လုံး ရှိသည်။ အသံကောင်းကို နားဆင်လိုလျှင် သစ်သားကောင်း၊ တိကျသော အတိုင်းအဆ၊ သေသပ်သော လက်ရာ၊ သံချေးတက်မနေသော ကြိုး အစရှိသည်တို့ လိုအပ်သလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း လှပသော ဂီတကို တီးတတ်ဖို့ လိုလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တှော နားလည်ထားသည်။
ကျွန်တှော့တွင် ဂစ်တာ တစ်လုံး ရှိသည်။ သူသည် ကျွန်တှော့ကို ဒုကဿခမပေးပါ။ ကျွန်တှော ဝမ်းနည်းသောအခါ သူသည် ကျွန်တှော၏ တိုးတိုးဖှော ဖြစ်သည်။ ကျွန်တှော ပျှောရွှင်သောအခါ ကျွန်တှော၏ စွန်ကလေး ဖြစ်သည်။ သူ့ကို ကျွန်တှော ချစ်ပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် ဖိနပ် တစ်ရံ ရှိသည်။ ရူးသွပ်နေသောသူများ ဖိနပ်စီးဖို့ သတိမရကြဟု ကြားဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူကောင်းလို့ ကျွန်တှောတို့ သတ်မှတ်သူများအားလုံး ကမဿဘာမြေကြီးနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု နည်းပါးပြီး အောက်ခြေလွတ်တတ် ကြပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် ကင်မရာ တစ်လုံး ရှိသည်။ ထိုကင်မရာကို အဖြစ်အပျက် တစ်ချို့ မှတ်တမ်းတင်ဖို့လို့ ကျွန်တှော ရည်ရွယ် ခဲ့သည်။ သို့သှော ကျွန်တှော ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံကို ရိုက်လိုက် မိစဉ်မှာပင် ထိုအရာသည် အတိတ် ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တှော လက်ရှိအရာများကို လိုက်ဖမ်းနေမိခဲ့သည်။ ကျွန်တှော လိုက်ဖမ်းဦးမည်။ တစ်နေ့နေ့တွင်တော့ တစ်စုံတစ်ခုကို ကျွန်တှော့ကင်မရာလေးမှ ရိုက်ကူး နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် ခဲဖျက် တစ်တုံး ရှိသည်။ အရာအားလုံး မဖျက် နိုင်တောင်မှ အကြည့်ရဆိုးသော အမှားများကို သေသပ်စွာ ဖျက်နိုင်အောင် ကျွန်တှော ကြိုးစားပါမည်။
ကျွန်တှော့တွင် ခဲဖျက် တစ်တုံး ရှိသည်။ လူဟာ ဖြစ်လာကတည်းက အပြစ်သားဟု ဘုရားသခင် ဆိုသလို ကျွန်တှော အမှားမလုပ်ရသေးခင်မှာပင် ထိုခဲဖျက်က ပါလာခဲ့သည်။ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ် နိယာမအရ ကျွန်တှော့မှာ ခဲဖျက် ရှိနေတော့ တချိန်ချိန်တွင် ကျွန်တှော အမှားတစ်ခုခု လုပ်မိမှာ အသေအချာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ အချက်ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှု စေလိုပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် မှန်တစ်ချပ် ရှိသည်။ အမှန်တရား၏ နောက်တွင် ဘာရှိသလဲ ဆိုသော စကားကို ဖွေရှာသော အနေဖြင့် မှန်နောက်က ပြဒါးတွေကို ကျွန်တှော ဖျက်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တှော မြင်နေခဲ့သော ကျွန်တှော ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ ကျွန်တှော ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တှော့တွင် မှန်တစ်ချပ် ရှိသည်။ နှစ်ဖက်မြင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တှောက တစ်ဘက်မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြင်နေရသလို၊ သူမကလည်း တစ်ဘက်မှ သူမကိုယ်သူမ မြင်နေရသည်။ တကယ်တော့ ကျွန်တှောတို့ နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မတွေ့ကြသေးပါ။
ကျွန်တှော့တွင် မှန်တစ်ချပ် ရှိသည်။ ကြေမွသွားသော မှန်တစ်ချပ်ကို ဘယ်လို ပြန်ဆက်ရင် ကောင်းမလဲ ကျွန်တှော စဉ်းစားမိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့တွင် သော့တစ်ချောင်း ရှိသည်။ တစ်ရက်သော ညနေက ထိုသော့လေးကို လမ်းတစ်နေရာမှာ ကျွန်တှော ကောက်ရခဲ့သည်။ သော့ခလောက်ပေါင်း များစွာထဲမှ တစ်ချက်ထဲ လှည့်လိုက်ရုံမျှနှင့် ဖျတ်ခနဲ့ ပွင့်သွားမည့် သော့ခလောက်ကို တွေ့ဖို့ရာ မလွယ်ကူလှပါ။
ကျွန်တှော့တွင် သော့တစ်ချောင်း ရှိသည်။ ထိုသော့လေးဖြင့် ကျွန်တော့ဘဝ၏ အရေးကြီးသော အကြောင်းအချက် တချို့ကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ဖွင့်ကြည့်နိုင်သည် ဆိုသည်မှာ အတင်း ဖွင့်ခိုင်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ စပ်စုလိုသူများ ကိုယ့်ဆနဿဒနှင့်ကိုယ် ဖွင့်ကြည့်ပြီးလျှင် ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ တဖြစ်တောက်တောက် ပြောခြင်းကို ကျွန်တှော့ သော့ကလေးက မုန်းတီးပါသည်။ ပရိုက်ဗေဆီ ဆိုသော စကားကိုလည်း နားလည်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တှော့တွင် မီးအိမ်လေး တစ်လုံး ရှိသည်။ အလင်းရောင် ရလိုလျှင် ရေနံဆီ ထည့်ပေးရပါလိမ့်မည်။ ရေထည့်ပြီး အလင်းရောင်ရယူဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တှော့ မီးအိမ်ကို ငှားရမ်းပြီး မီးထွန်းညှိလိုလျှင် ရေနံဆီ ရှိဖို့ ပထမ လိုပါလိမ့်မည်။ ရေထည့်ပြီး မီးအိမ်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့တော့ မကြိုးစား ကြပါနှင့်။
ကျွန်တှော့တွင် တူတစ်လက် ရှိသည်။ တူဆိုသည်မှာ အခြားသောအရာများကို ထုနှက်ဖို့ဟု တယူသန် မယူဆသင့်ပါ။ ကျွန်တှော မြတ်နိုးလို့ ဝယ်သိမ်းထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရော မတွေးမိသင့်ဘူးလား။
သေတဿတာလေး တစ်လုံးထဲတွင် ဘယ်တော့မှ မတီးဖြစ်တော့သော ဂစ်တာလေး တစ်လက်ကို ထည့်သိမ်းထားလိုက်သည်။ ထိုသေတဿတာလေးကို ကျွန်တှော ပိုင်ဆိုင်သော သော့လေးဖြင့် ခတ်လိုက်သည်။ အချိန်က ၂၀၀၅ ဟု ကျွန်တှော့ နာရီလေးက ဆိုပါသည်။ အခန်းနံရံမှ မီးအိမ်လေးက ခပ်ဖျော့ဖျော့ လင်းနေသည်။ ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တှော ပြဒါးပြယ် မှန်ထဲမှာ ကြည့်နေမိသည်။ တစ်ခါမှ တခြားသော အရာများကို မထုနှက်ခဲ့ဘူးသော တူဖြင့် ခဲဖျက်လေး တစ်တုံးကိုလည်း ထုပြီး ချေမွ ပစ်လိုက်သည်။ တံခါးဝမှာ ဖိနပ်လေး ရှိနေသည်။ ကျွန်တှောထွက်ခွာဖို့ အချိန်ကျခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ လောကမြေသားနှင့် ထာဝစဉ် ထိတွေ့ချင်သဖြင့် ထိုဖိနပ်လေးကို ထားခဲ့ပြီး ကျွန်တှော ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်လေးမှာပင် ကျွန်တှော့ကို ကျွန်တှော တွေ့လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ကင်မရာလေးကို ထုတ်ပြီး ကိ်ုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဓါတ်ပုံ ပြန်ရိုက်လိုက်သည်။ ထိုဖလင်ကို ဘယ်တော့မှ ကျွန်တှောကူးဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါ။
သစဿစာနီ၏ အခြားသော အရာများနှင့်လူ ဝတဿထုကို ဖတ်ပြီးချိန်တွင် ရေးသားချင်ခဲ့သော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဝတဿထုကို ၂၀၀၀ လောက်က ဖတ်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၆ တွင် ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါသည်။
Posted by NLS at 4/23/2006 09:47:00 PM0comments Links to this post
Tags : Google Logo , NLS Logo , Google Design
Posted by NLS at 4/23/2006 12:57:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/22/2006 11:58:00 PM0comments Links to this post
She is my beautiful talent PSM. She helped me alot when I was in SG. That photo was taken for My School's B&W Project. We took that photo in Botanic Garden. Not only that, also helped me free for my MTV Prj. How lucky I m, for having such helpful friend.Tnx PSM!!
Tags : Friend , Photo , PSM
Posted by NLS at 4/22/2006 11:45:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/22/2006 11:29:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/22/2006 04:13:00 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ အင်တာနက်မှာ အာဆီယံက မလေးရှားဝန်ကြီး ပြောနေတာတွေ ဖတ်ပြီး ထိုင်စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဒီလူကြီးက ဗလောင်းဗလဲ သိပ်ပြောတတ်တယ်။ ပထမ မြန်မာပြည်က ပြန်လာခါစက သူ့ခရီးစဉ် အောင်မြင်ပါတယ်တဲ့။ ခဏကြာတော့ မအောင်မြင်ဘူး ဖြစ်သွားပြန်ရော။ သေချာ လေ့လာကြည့်ရင် အာဆီယံမှာ မြန်မာ့အရေးကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် ဆွေးနွေးနေ စိုးရိမ်နေကြတာ ၂ နိုင်ငံ ရှိတယ်။ မလေးရှားရယ်၊ စကဿငာပူရယ်။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ သိပ်ဂရု မထားပါဘူး။ ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုလည်း နဲနဲတော့ ပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အသဲအသန် လိုက်စွက်ဖက် နေကြတာလဲ စဉ်းစားကြည့်ရင် စီးပွားရေး အဓိက ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ဟာ ပထဝီ တည်နေပုံအရ အဲဒီ နိုင်ငံတွေ အတွက် အတှောလေး အရေးပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ အကျယ်အဝန်းနဲ့ ဈေးကွက်ဟာ အများကြီး ရှိတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေက ကုန်စည်တွေဟာ မလကဿကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ပြီး အရှေ့ကမဿဘာခြမ်းကို ပို့ကြရတယ်။ စကဿငာပူနဲ့ မလေးရှားက ကြားထဲကနေ ထရန်စစ် ကုန်သေတဿတာ ဆိပ်ကမ်းတွေ လုပ်ပြီး အကျိုးအမြတ် ရှာတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းဟာ စကဿငာပူအတွက် အဓိက စီးပွားရေးလည်း ဖြစ်တယ်။ သဘေဿငာတွေဟာ ကြားခံအဖြစ် စကဿငာပူနဲ့ မလေးရှားမှာ ကုန်တွေကိုချ၊ အဲဒီကမှ တဆင့်ပြန်ဖြန့်ကြတယ်။ ကုန်သေတဿတာတင် သဘေဿငာတစ်စီးရဲ့ အမြန်နှုန်းဟာ တစ်နာရီ မိုင် ၂၀ နှုန်းရှိတယ်။ အိနဿဒိယရဲ့ အောက်ဖက် အစွန်းကနေ မလကဿကာ ရေလက်ကြားကို ဖြတ်ပြီး တရုတ်ပြည် ပီကင်းကို တိုက်ရိုက် ကုန်ပို့မယ်ဆိုရင် ခရီးမိုင်ပေါင်း ၅၆၅၃ မိုင်လောက် ခုတ်မောင်းရတယ်။ တကယ်လို့များ မြန်မာပြည်ကနေသာ တိုက်ရိုက် ဖြတ်လို့ ရမယ်ဆိုရင် ခရီးမိုင်က ၃၆၀၀ ကျှောကျှောပဲ ရှိတယ်။ မိုင် ၂၀၀၀ ကျှော သက်သာမယ်။ အဲဒီအပြင် ပီကင်းကိုသာ မကဘဲ တရုတ်ပြည် အလယ်ပိုင်း အနောက်ပိုင်း အားလုံးနဲ့၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမေဿဗာဒီးယား တို့ကိုပါ ဖြန့်ချီနိုင်မယ်။ ကုန်ကျစရိတ် အများကြီး သက်သာနိုင်တယ်။
ပြီးတော့ မလကဿကာ ရေလက်ကြားက ပင်လယ်ဓါးမြ အနဿတရာယ် လည်းရှိသေးတယ်။ ပင်လယ် ဓါးမြတွေဟာ အဲဒီရေလက်ကြားမှာ အမြန်ရေယာဉ်လေးတွေနဲ့ အနဿတရာယ် ပြုနေတာ တှောတှောကြာပြီ ဖြစ်တယ်။ တချို့ဆို သဘေဿငာတစ်စင်းလုံးကို အပိုင်စီးကြတယ်။ လူတွေကို သတ်ပစ်ကြတယ်။ ဒီပြသဿသနာဟာ သဘေဿငာတိုင်း အဓိက ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့ ပြသဿသနာပါ။ ပင်လယ်ဓါးပြတွေ အပိုင်စီးခံရတဲ့ သဘေဿငာဟာ ပြန်ရဖို့ လုံးဝ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် သဘေဿငာတိုင်းဟာ မလကဿကာ ရေလက်ကြားကို သတိအရမ်းထားကြသလို ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တှောတို့ မြန်မာပြည်ကသာ ပုသိမ်လို နေရာမျိုးမှာ ရေနက် ဆိပ်ကမ်းဆောက်ပြီး တိကျ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကုန်စည် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရင် မလေးရှားနဲ့ စကဿငာပူ ဒုကဿခရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ စီးပွားရေး သိသိသာသာကြီး ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းသာ အဆင်ပြေရင် အဲဒီနိုင်ငံတွေ ခေါင်းတောင် ထူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေအနေနဲ့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ဦးမော့သွားမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာကို မလိုလားဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ သက်ဆင် လက်ထက်မှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းဟာ အတှောပြေလည်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်သာ အောင်မြင်ခဲ့ရင် မြန်မာဟာ အရှေ့တောင် အာရှမှာ အရေးပါတဲ့ အချက်အခြာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု၊ ဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီလို ဆိပ်ကမ်းမျိုး ဖြစ်ဖို့ရာ မြန်မာတွေ အနေနဲ့ စကဿငာပူဆိပ်ကမ်းလို တိကျ မြန်ဆန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်သလို၊ ယုံကြည်မှု ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ခေတ်မီတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် အရှေ့တောင် အာရှမှာ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ ရေကြောင်းအရေးပါမှုကို ဦးနှိမ်ပြီး အဲဒီအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ အသုံးချ နိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ စီးပွားရေး အမြင်နဲ့ ကြည့်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ပြေပြေလည်လည်နဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်နေမှာထက် ပြည်တွင်းရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်နေတာကို ပိုပြီးလိုလား နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်နေမိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တှော့ အမြင်သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags : Myanmar Economic , Chaos
Posted by NLS at 4/22/2006 03:15:00 PM0comments Links to this post
တောနဲ့ တောင်စွယ် လယ်ယာတလင်း
ရှုလေချစ်သော ခရီးသည်) ၂
ရွှေသူဌေးတို့ လှူခဲ့ပါတယ် ဝင်းဝါလို့ရယ်
ဘယ်ဧည့်သည် ငေးမဆုံး တွေးမဆုံးဖွယ်
ညနေညို နှမမေပျို ရေချိုခပ်တယ်
အသင်းပေါင်းကြည့်လေကွယ် ရှုလေကွယ် သိလေမယ်
မြန်မာရှုခင်း မြန်မာစိတ်ရင်း အရှင်းသိရမယ်။
Tags : Win Oo , Myanmar Song , Myanmar Lyric
Posted by NLS at 4/21/2006 08:52:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/21/2006 07:34:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/20/2006 03:21:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/20/2006 02:46:00 PM0comments Links to this post
Myanmar regulates Internet cafes and even requires them to take screenshots of their monitors every five minutes -— just to make sure no one is accessing banned websites.
Tags : Knowledge , Chaos
Posted by NLS at 4/20/2006 02:03:00 PM0comments Links to this post
There were4bomb explosions in different places of Yangon early morning of 20th April, 2006. There has no releases or announcements yet from Government. Rumors say those explosions had been occured 40th Street, Bo Aung Kyaw Street, Yaw Min Gyi Street and Yangon Main Post Office.
ရန်ကုန်မှာ ဒီနေ့မနက် အစောကြီး ဗုံးကွဲတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ လမ်း ၄၀၊ ဗိုလ်အောင်ကျှောလမ်း၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး နဲ့ ယောမင်းကြီးလမ်းမှာ ကွဲတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သတင်းစာတွေ ထဲမှာတော့ မပါသေးပါဘူး။ လူအသေ အပျောက်ကိုလည်း မသိရသေးပါဘူး။ ဒီလို ပြည်သူလူထုကို ဒုကဿခပေးတဲ့ လုပ်ငန်းများဟာ လွန်စွာမှ စက်ဆုပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကုလားမနိုင်လို့ ရခိုင်မဲ တာနဲ့ တူပါတယ်။
အင်တာနက်မှာ အဲဒီသတင်းအကြောင်း ပါလာပါပြီ။ မနက် ၂နာရီ ၁၅မှာ ကျောက်တံတား မြို့နယ်အတွင်း ပေါက်ကွဲမှု လေးကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၃ နေရာက ထရမ်စမှောမာ တွေကို ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခုက ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး အဝင်ဝမှာ ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ ၅ နေရာမြောက်က စကော့ဈေး ကနေ ယောက်လမ်းကိုအကူး ကုန်းကျှော တံတားအနီးမှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူအသေအပျောက် မရှိပါဘူး။
Source : TMC , Reuter
Tags : News , Myanmar Bomb Explosions
Posted by NLS at 4/20/2006 10:53:00 AM0comments Links to this post
ဒီဆိုဒ်မှာ ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုနာမည်ကို ထည့်လိုက်ရင် အဲဒီဆိုဒ်က ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေ အားလုံးရဲ့ ဂူးဂယ်လ်ဆိုဒ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို တခါတည်း တွေ့ရမယ်။
Via : GB ,
Tags : Website , Page Rank
Posted by NLS at 4/20/2006 10:51:00 AM0comments Links to this post
ဒီနေ့ဟာ ဂျွန်မီရိုရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာ ဂျွန်မီရိုဟာ နေတစ်စင်းလို ထင်ရှားပါတယ်။ ဂျွန်မီရိုကို ၁၈၉၃ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အရောင်တောက်တောက် ဆာရီရယ်လ်လစ် ဆန်ဆန် Abstract ရေးဟန်များနဲ့ မီရိုဟာ ထင်ရှားပါတယ်။ ဂူးဂယ်လ်က မီရိုကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ဆက်ရ်ှအင်ဂျင် ပေခ်ျ့ကို မီရိုရဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Tags : Joan Miro Logo on Google , Chaos , Knowledge
Posted by NLS at 4/20/2006 10:50:00 AM0comments Links to this post
ကိုယ့်ဌာနေ ဝန်းကျင်မှာကွယ် တကယ်ပင် အလှရှိတယ်။
စုံမြိုင်ခြေဂနိုင်မြေလမ်း အထွေထွေ ဆန်းပြားကြွယ်
တကယ်အလှရဲ့မူမှန်ကိုကွယ် တွေးကာ ငေးကြည့်ဝယ်
ဘဝရဲ့သစဿစာမည်တယ် ခိုင်မာ အမြဲမြစ်တွယ်
Tags : Win Oo, Song , Lyric
Posted by NLS at 4/20/2006 09:49:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော ၁ နှစ်သားလောက်မှာ ကျွန်တှောတို့မိသားစု မိတဿထီလာဆိုတဲ့ တမာရနံ့ ထနောင်းရနံ့တွေသင်းနေတဲ့ လှပတဲ့မြို့ကလေးကို ပြောင်းရတယ်။ ကျွန်တှော တခါတခါ ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်လေး တွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ပြန်ပြန်ပြီး သတိရနေ တတ်တယ်။ အဖေက အမေ့ကို စက်ဘီးလေးနဲ့တင်ပြီး ဈေးကိုသွားတဲ့အခါ ကျွန်တှောက ရှေ့လက်တန်းမှာ ထိုင်လို့ပေါ့။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ စက်ဘီးသီချင်းလေးကို အဖေအမြဲ ဆိုတတ်တာလည်း ကျွန်တှော မှတ်မိနေ ပါသေးတယ်။ ကျွန်တှော့အကိုနဲ့ကျွန်တှောက အသက် ၈ နှစ်ကွာပြီးတော့ အမနဲ့က ၆ နှစ်ကွာပါတယ်။ ကျွန်တှော့ကို သူတို့နှစ်ယောက် ထိန်းကြရတယ်။ သူတို့က ကျွန်တှော့ကို သိပ်ချစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ကစားတဲ့နောက်ကို ကုန်းပိုးပြီး ခှေါခှေါသွားကြတယ်။ ငယ်ငယ်က မောင်နှမတွေစုပြီး အသံလေးတွေ အခွေလေး ရှိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တှောတို့ အိမ်မှာ လိုက်နေတဲ့ အမျိုးတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဦးလေးတွေ အကိုဝမ်းကွဲ တွေရဲ့ အသံတွေလည်း သွင်းကြတယ်။ အကိုက သူ့ကိုယ်သူ ပိုင်ပိုင် လို့ ပြောတတ်တယ်။ အမကတော့ ငုံငုံတဲ့။ သူတို့ကဗျာလေးတွေ ရွတ်ကြတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ဟိုအှော ဒီအှောပေါ့။ အဲဒီ အသံသွင်းထားတဲ့ အခွေကို နားထောင်မိတိုင်း ကျွန်တှောဟာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မျက်ရည် လည်ရတယ်။ ဘာလို့လည်းလို့မေးရင် ကျွန်တှောဖြေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝမ်းနည်းလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကလေးဘဝက ကျွန်တှောတို့ရဲ့ ဖြူစဉ်မှုလေးတွေ ချစ်ခင်မှုလေးတွေကို သတိရမိလို့လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမဟာ ကျွန်တှော့ကို ထမ်းထမ်းပြီး ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း ကစားရတယ်။ အကိုက သူသွားလေရာတိုင်း ပုခုံးပှေါတင်ပြီး ခှေါသွားတယ်။ ကျွန်တှောဟာ အဲဒီအချိန်လေးတွေကို မျက်လုံးထဲမှာ ခဏခဏ မြင်မြင်နေတတ်တယ်။ အမေကတော့ အဖေပြောင်းတဲ့ အရပ်ကို လိုက်နိုင်အောင်ဆိုပြီး ဆရာမအလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်တယ်။ အဖေ နိုင်ငံခြားလေး သွားလိုက်ရတော့ ကျွန်တှောတို့ မိသားစု အခြေအနေလေးက အရင်ကလိုတော့ အဆိုးကြီး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ပိုင်ဆိုင်စရာ ပစဿစည်းလေးတွေ နည်းနည်းတိုးပွားလာတယ်။ စက်ဘီးလေးတစ်စင်းရယ်၊ သိပ်လိမ်မာတဲ့ နွားကြီး နှစ်ကောင်ရယ်၊ ဆန်ညို ကက်ဆက်ကလေးရယ်၊ ကင်မရာလေးတစ်လုံးရယ်၊ နောက်တော့ရော...။ ဒါပါပဲ။ ဪ အဲဒီအချိန်အထိ ကျွန်တှော့အကိုဟာ မိကျောင်း စက်ဘီးလေး နင်းပြီးတော့ နွားနို့သွားပို့ရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှောလေးနှစ်သားမှာ ကျွန်တှော့ကို မူကြိုပို့ဖို့ လုပ်ကြတယ်။ ကျွန်တှောမှတ်မိနေတာက ကျွန်တှော ကျောင်းသွားရတာကို အရမ်းရှက်နေတာပါပဲ။ ပထမဆုံး ကျောင်းအပ်အပ်ပြီးချင်း အမေက ကျွန်တှော့ကို ထားလို့ ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ဆရာမလေးက ကျွန်တှော့ကို သား လို့ခှေါလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ကျွန်တှော ငိုပါတော့တယ်။ ကျွန်တှော့အသိစိတ်ထဲမှာ ကျွန်တှော့အမေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တှော့ကို သားလို့ခှေါတာကို ဘယ်လိုမှ မခံနိုင် ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့လည်း ကျွန်တော့ကို ခွံကျွေးကြတာကို ကျွန်တှော ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်နေ့ ကျောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တှော အပြင်းအထန် ငြင်းဆန်ပါတော့တယ်။ မျက်ရည် လည်ရွဲနဲ့ ကျောင်းမတက်ချင်တဲ့ ကျွန်တှော့ကို အဖေကသနားသွားတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တှော မူကြို မတက်ရတော့ဘူး။ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကျောင်းဝတ်စုံလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ကျောင်းသွားလို့ပေါ့။
အပိုင်း(၃)ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ [Click]
Posted by NLS at 4/20/2006 08:30:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/19/2006 07:58:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/19/2006 07:10:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/19/2006 04:10:00 PM0comments Links to this post
ပလန်းနတ်မှာ မန်ဘာ တစ်ယောက်က ကျွန်တှော့ကို ဆှောထားတာလေးပါ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရယ်လိုက်ရတာ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တှော ခင်ဗျားနဲ့ ကယ်လ်မွန်ကို မီးမတိုက်ပေးပါ။ ခင်ဗျားလုပ်တာ လူကြီးမဆန်လို့ ဒီဖက်မှာ တင်ပြတာပါ။ တိရိစဿဆာန် တှောတှောများများမှာ လိင်တူ ဆက်ဆံတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တှော Type ရိ်ုက်တုန်းက ကျန်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခင်ဗျား ဒီလို ပြန်ပြောလိမ့်မယ် ဆိုတာကိုလဲ ကြိုတွက်ထားပြီးသားပါ။ ကိုဝေဟန့်ကို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုပေမယ့် ခင်ဗျားက ဒီထဲမှာ ဝင်ရေးတဲ့ လူတွေကပဲ သူ့ကို မြှောက်ပေးသလေးနဲ့ ပြောတာကို သဘောမကျလို့ ဝင်ပြောတာပါ။ တကယ်တန်း စကဿငာပူမှာ နေနိုင်ရုံလောက် ဘလော့စာလေး ဟိုရေးဒီရေး ရေးနိုင်ယုံလောက်နဲ့ သွေးနားထင် ရောက်ပြီး လူတိုင်းကို အပှေါစီးက စကားလိုက်ပြောနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဖက်ပြီး ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တှော့မှာ အချိန်မရှိပါ။ ခင်ဗျား စာအများကြီး ဖတ်ဘူးတယ် ဆိုတာက လွဲပြီး တခြား ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ် ဖှေါဖို့ နည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလား။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ Debate ဖြစ်တိုင်း အဲဒီစကားပဲပြောပြီး တစ်ဖက်ကလူကို မတူမတန် သလိုနဲ့ Debate ထဲက ကန်ထုတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို မြင်နေရလို့ပါ။ ခင်ဗျားက အပြောလဲ မခံနိုင်ရှာပဲကိုး။ ဒီလိုလူမျိုး ကျွန်တှော တှောတှော များများ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီး နေသှောငြားလဲ ကိုယ်တကယ် အသုံးမကျဘူး ဆိုတာ သိတဲ့ အတွက် တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုဝေဖန်တာနဲ့ ရှူးရှူးရှားရှား ဖြစ်ပြီး ‘မင်းက ဘယ်လောက်သိလို့လဲ’ ဘာညာ ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ ဖြဲခြောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြောက်အကန် ကာကွယ်တတ်တဲ့ လူမျိုးပါ။ ထပ်ပြီးပြောမယ်နှော။ ခင်ဗျားအတွက် ကျွန်တှော့မှာ အချိန်မရှိပါ။ ခင်ဗျား ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းတာကို သဘောမကျလို့ ကျွန်တှော ဝင်ပြောတာပါ။ အဲလို ဘေးလူဝင်ရေးတာ သဘောမကျရင် ကိုဝေဟန့်ကို Private Message ပို့ပါ။ ဖိုရမ်ပှေါ တက်ရေးရင်တော့ ဘေးလူက ဝင်ပါမှာပဲ။ ‘ခင်ဗျား’ တွေချည်းထပ်ပြီး ပြောနေလို့ ကျွန်တှော့ကို ရိုင်းတယ်ပြောလဲ ဂရုမစိုက်ပါ။ ခင်ဗျားလိုလူမျိုး ဒီလို စကားလုံးမျိုးနဲ့ပဲ တန်ပါတယ်။
PS. ခင်ဗျား စာတွေအများကြီး ဖတ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြတဲ့ အနေနဲ့ ဟိုစာဖတ် ဒီစာဖတ်ခိုင်း လုပ်တာမျိုးကရော ကလေးမဆန်လွန်ဘူးလား။ [Link]
ဒေါသ မထွက်တဲ့အပြင် ရယ်မိနေ ပါတော့တယ်ဗျာ။ မကျေနပ်တာ ရှိရင် ဟောဒီပိုစ့်မှာ ဆက်ဖတ်ပါဗျား။ [Click]
Posted by NLS at 4/19/2006 12:51:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/19/2006 10:48:00 AM0comments Links to this post
ယနေ့မှစ၍ မည်သည့် ဖိုရမ်တွင်မှ ပါဝင်ရေးသားခြင်း မပြုတော့ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငြင်းခုန်ရသော အလုပ်များကို အလွန်တရာ စက်ဆုပ် သွား၍လည်း ဖြစ်သည်။ ဝါဒ မတူသူများကို မမြင်လို၍လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုထိုသော ဖိုရမ်များမှ အကျိုးတရား များစွာ ရသလို စိတ်ပျက်ခြင်းများလည်း များစွာ ရသည်။ ထို့အတူ ကျွန်တှော့ဘလှောခ့်အားလည်း ပါဆင်နယ်လ်အဖြစ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ လာရောက် ဖတ်ရှုသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သှော ကျွန်တှော့ ဘလှော့ခ်လေးမှ အသိဉာဏ် တိုးတက်စေသော အရာများ တွေ့နိုင်သည်ဟု အာမ မခံပါ။ သူငယ်နှပ်စား အတွေးများကို တွေ့ခဲ့လျှင် ညီလင်းဆက်ကို သူငယ်နှပ်စားဟုသာ မှတ်သားကြပါ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စကားများကို တွေ့ခဲ့လျှင် စိတ်ကြီးဝင်နေသူဟု မှတ်ပါ။ ကိုယ်နှင့် အယူအဆ မတူတာတွေ တွေ့ခဲ့လျှင် ဒုံးဝေးသူဟု မှတ်ပါ။ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ စာများကို တွေ့လျှင် စိတ်မနှံ့သူဟု မှတ်ပါ။ အားတိုင်းယားတိုင်း ရေးထားသော အက်ဆေးများတွေ့လျှင် အချိန်ပိုများစွာ ရှိတဲ့ကောင်ဟု မှတ်ပါ။
အဆိုပါ ကျွန်တှော ညီလင်းဆက်တွင် အထင်ကြီးစရာ အကွက် တစ်ကွက်မှ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အထင်ကြီးစရာ မလိုပါ။ ဝေဖန်ရန် မတန်သူဟုလည်း မှတ်ပါ။ ညာဘက်တွင် ရှိနေသော Shout Box မှာ ကျွန်တှောနဲ့ ခင်မင်သူ သူငယ်ချင်းများ Instant Messaging လုပ်နိုင်ရန် ထည့်သွင်း ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပိုစ့်မှာပါသော အချက်များကို မကျေလည်သူများ ဝေဖန်လိုသူများ Comment တွင်လည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက်မေးပို့၍ သှောလည်းကောင်း ဝေဖန်နိုင်ပါသည်။ ဝေဖန်ချက်များကို ဖြေရှင်းလိမ့်မည် လို့လည်း အာမ မခံပါ။ ထို့ကြောင့် အမြင်ကတ်လျှင် လာမဖတ်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ လာဖတ်ပြီး နွားစားမြုံ့ ပြန်သလို တတွတ်တွတ် ပြောနေတာ နားခါးပါသည်။
ဝေဖန်လိုလျှင် ပထမဆုံး ပညာအရည်အချင်း တိုင်းတာပါ။ မောင်ညီလင်းဆက်သည် ပညာမာန် တက်ပါသည်။ သူများတွေလို မာစတာတွေ ပီအိပ်ခ်ျဒီတွေ မဖြစ်ခဲ့သှောလည်း အလွန်တရာ တက်ပါသည်။ ပညာအဆင့်အတန်း မတူဘဲ ဝေဖန်လျှင် ယောမင်းကြီး၏ မြင်းထိန်းငတာ ဝတဿထုကို သွားသွား သတိရမိသည်။ ဒုတိယ အနေဖြင့် အတွေ့အကြုံ တိုင်းတာပါ။ ကျွန်တှော့ အသက်အရွယ်နှင့် ထောင်မှတပါး အခြားသော အရာအားလုံးကို တွေ့မြင် သိရှိခဲ့ဖူးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးကို စမ်းဖူးသည်။ မစမ်းဘူးပဲ စာတွေ့သိမြင်သူများ ကျွန်တှောနဲ့ စကားပြောရန် မလိုပါ။ တတိယ Observation နှင့် တိုင်းတာပါ။ ကျွန်တှော့အသက် ၂၆ တွင် ကမဿဘာ့နိုင်ငံပေါင်း များစွာကို ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး ဖြစ်သည်။ (ကြွားသည်ဟု ထင်လိုထင်) ဝါသနာ ပါသောကြောင့် ရောက်လေရာ အရပ်တွင် အရာရာ စူးစမ်းဖူးသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုအကြောင်း သိရုံမျှနှင့် ကျွန်တှောနှင့် အပ်စပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တှောကဲ့သို့ အမေကျှော ဒွေးတှော လွမ်းတတ်သူကို ဖာသိဖာသာ ကျဉ်ထားလိုက်ပါ။ ထိုမျှလောက် ဆိုလျှင် မောင်ညီလင်းဆက်သည် နားအေးပါးအေးနှင့် လွန်စွာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို လွန်စွာ နှစ်သက်ပါသည်။ ကျေးဇူး တင်ပါသည်။
ရေပှေါဆီ ဆိုသည်မှာ မြန်မာစကားတွင် တှောတှောဆိုးပါသည်။ သို့သှော ကျွန်တှော မြန်မာပြည်မှာ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာတွင် ဆီသည် ရေထက် ဈေးကြီးတာကိုတော့ သတိပြုစေလိုပါသည်။ ထိုသို့ ခှေါမည်ဆိုလျှင် လွန်စွာ ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
Tags : Diary , Chaos
Posted by NLS at 4/18/2006 07:20:00 PM0comments Links to this post
မှန်လား မမှန်လားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။ သတင်းစာမှာ ရေးထားတာလေး ဖှောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီမဏဿဍာပ်က ကွန်ပြူတာ တကဿကသိုလ်အတွက် ချပေးထားတဲ့ မဏဿဍာပ်ပါတဲ့။ အဲဒါကို ဘောသမား အောင်ကျှောကျှောကို တဆင့် ပြန်လည် ရောင်းချထားတာလို့လည်း လျှို့ဝှက် သတင်းများက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမဏဿဍာပ်က ဟိုးအရင် နှစ်တွေထဲက ယိုင်သွားရတာနဲ့၊ နိမ့်ဆင်း သွားရတာနဲ့ မျိုးစုံ ဖြစ်နေတာ။ ဒီနှစ်တော့ ပြိုတော့တာပဲ။ ကွန်ပြူတာကကောင်တွေ လုပ်လိုက်ရင် သောက်ရမ်းတွေ ချည်းပဲ။ လူမသေဘူးဆိုရင်ပဲ ကံကောင်း။
Posted by NLS at 4/18/2006 09:16:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/18/2006 08:21:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/18/2006 07:55:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 4/17/2006 11:57:00 PM0comments Links to this post